China fireproof aruminiyamu epurasitiki ndiro fekitari uye bhizimisi | Jixiang
Yakanakisa mashandiro maficha echigadzirwa:
1. Iyo ine yakanakisa moto kuramba uye murazvo kudzora, uye inogona kutsiga kupfuudza iyo yenyika inomanikidzwa standard GB8624 "kupatsanura nzira yekupisa mashandiro ezvivakwa zvekuvakisa", uye kupisa kwayo kuita hakuna kudzika kupfuura B1 nhanho;
2. Yakakura peel simba uye yakanaka michina zvivakwa, kusangana nevekunze zvinodikanwa zveGG / t17748 aluminium epurasitiki yakakomberedzwa ndiro
3. Iko musimboti wezvinhu maitiro ane simba rakachinjika, rinenge risingachinje iyo extrusion yekugadzirisa mamiriro eakajairwa aruminiyamu-epurasitiki ndiro, iyo inogona kusangana nehunyanzvi nzira nzira inodikanwa yeakasiyana aluminium-epurasitiki ndiro yekugadzira maitiro kumba uye kunze kwenyika;
4. Iyo yepakati zvinhu zvine yakanakisa yekupisa okisijeni kukwegura chivakwa uye inogona kumira yakakwira uye yakadzika tembiricha - 40 ℃ - + 80 ℃ yemakumi maviri mairi pasina shanduko;
5. Iyo murazvo unodzora uri mune yepakati zvinhu zvine kugadzikana kwakanaka, hapana kutama uye kunaya, uye yakanaka mamiriro ekunze, ayo anokunda hurema hweyakajairika halogen murazvo retardants ayo asingapikise kune ultraviolet mwenje, saka inokodzera kwazvo zvemukati nekunze. mapurani ekushongedza;
6. Iyo yepakati zvinhu zvechigadzirwa chena kana grey chena jena, uye inogona kugadzirirwa mune mamwe mamwe mavara;
7. Iyo yakakosha zvinhu ndeye nharaunda-inoshamwaridzika murazvo unodzora uye yakachena zvinhu, halogen-isina uye yakaderera utsi. Zvakanyanya kuoma kupisa. Iyo utsi vhoriyamu idiki kwazvo kana uchitsva, uye hapana gasi rinoparadza uye utsi hutema. Iyo haina kusvibiswa-isina uye inosangana nezvinodiwa zvehurumende kune zvakasvibirira zvekuvakisa uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza.
Iyo yakakodzera kune keteni madziro uye yekunze neyekunze kushongedza ine yakakwira moto kudzivirira zvinoda.
Pashure: Art inotarisana nealuminium epurasitiki
Zvadaro: Nano kuzvichenesa aruminiyamu epurasitiki ndiro